बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ : विवेक झा [अन्तर्वार्ता]
पछिल्ला वर्षहरुमा बीमा गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । जीवन बीमाको बजार अझै बढ्दो छ । बीमाको कारोबार बजार बढ्दै गए पनि ग्रामिण भेगमा अझै पनि यसबारे पर्याप्त र प्रभावकारी जानकारी नभएको गुनासा सुनिन्छन् । खासमा जीवन बीमाका समस्या के हुन् ? यो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी हेर्छ ? यिनै विषयमा लोकान्तर डट्कमकी मनीषा अवस्थीले नेपालको जीवन बीमाको बजारमा अग्रणी स्थानमा रहेको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विवेक झासंग कुराकानी गरेकी थिइन् । हेरौं सम्पादित अंशः
जीवन बीमाको बजार कस्तो छ ?
बीमाको अवस्था यो वर्ष ज्यादै नै उत्साहजन छ । किनभने यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरु धेरै नै बढे । यसले अहिले एकैचोटी जनचेतना पनि बढाएको छ । पहिला यो क्षेत्रमा हामी औंलामा गन्न सकिने मात्रै थियौं । अहिले कम्पनीहरु थपिए, जसका कारण सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न शुरु गरे । यसअघि धेरै द्विबिधा थियो – पुराना कम्पनीहरुले के गर्लान, नयाँ कसरी आउलान ? अहिले त्यो चिरिएको छ । त्यसकारण बीमाको ‘बिजनेस ग्रोथ’मा सकारात्मक असर परेको छ ।
हामी निश्चित अवधिका लागि थोरै– थोरै गरेर बचत गर्ने, निश्चित अवधिको ‘म्याचुरिटी’ पछि त्यो फिर्ता गर्ने, फिर्ता गर्दा ब्याज वापतको पैसा जसलाई बीमाको भाषामा बोनस भन्छौं, त्यो पनि फिर्ता गर्छौं ।
फण्डको व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हो । कथम कथाचित बिमितलाई हामीले गरेको कबुल अनुसारको व्यवहार गर्न सकेनौं भने उहाँहरुले ठगिएको महशुस गर्नुहुन्छ । जुन निकै नराम्रो हुन जान्छ ।
प्रतिस्पर्धा बढेसँगै स्वभाविक रुपमा यसका केही नकारात्मक असर पनि पर्छन् । मार्केटिङ गर्दा बिकृतिका कुरा पनि सुन्नमा आइरहेको हुन्छ । त्यसकारण अवसरसँगै चूनौती पनि थपिएका छन् ।
नेपाली जीवन बीमा बजारले देशलाई पौने २ खर्बको लगानी दिन सक्ने भएको छ । करिब डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालको कूल गाह्रस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो क्षेत्रको योगदान छ । बीमाको बजार बिस्तार र पूँँजीमा बृद्धि हुँदै गएकाले भबिष्यमा जिडिपीमा राम्रो योगदान बढाउन सक्ने निश्चित छ ।
नम्बर अफ प्लेयर्सको हिसाबले बीमा क्षेत्रले रोजगारको अवसर पनि राम्रो दिएको छ । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमका रोजगारीका अवसर छन् ।
अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकर्ताको रुपमा काम गर्ने देशभरी झण्डै एक लाख जना छन् । जसमध्ये निरन्तर सक्रिय रहेकाहरु ४० हजार देखि ४५ हजारको बिचमा अभिकर्ता छन् ।
बीमाको इतिहास त्यति लामो छैन । जम्मा ५० वर्षको मात्रै छ । त्यसमा पनि सक्रिय रुपमा लागेको इतिहास निकै छोटो छ । त्यसकारण पनि हामी सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौं । समग्रमा बीमा क्षेत्र अहिले अगाडि बढिरहेको छ ।
तपाइँ आफू सिइयो रहेको नेपाल लाइफको बजार चाहीँ कस्तो छ ?
हामी राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो मार्केट शेयर पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३५ प्रतिशत मार्केट शेयर हामीले ओगटिरहेका छौं ।
हामीले बिजनेस प्लानमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरिरहेका छौं । ग्रोथ रेट गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर छ । त्यसले हाम्रा साथीहरुलाई प्रचारप्रसारका लागि पनि सजिलो भएको छ । बीमा भनेको एक पछि अर्को हुँदै, बढ्दै जाने बजार हो ।
व्यक्तिको कन्भिन्स पावरमा पनि भर पर्छ । हामीले त्यसमा ध्यान दिएका छौं । बिमितले पाउने रिटर्नलाई हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । यी सबै कारणले बीमा गर्न चाहनेहरुको पहिलो रोजाई हामी बनिरहेका छौं । आगामी दिनमा हामी यसलाई बढाउँदै लैजानेछौं ।
सरकारले बीमा उद्योगलाई कसरी हेरेको पाउनुहुन्छ ?
अहिले पनि मानिसहरुको अन्तिम प्राथमिकतामा बीमा छ । बीमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो नि । तर, अहिले बिस्तारै सिफ्ट भने भइरहेको छ ।
अहिले मिडियादेखि बिमितहरुले पनि यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । जस्तै तपाइँहरुले बीमा कम्पनीको सिइओको अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भन्ने महशुस गर्नुभयो । पहिला यस्तो महत्व दिने चलन थिएन ।
हाम्रो देशको नीति बनाउने कुरामा बीमाको कुरा निकै पछाडि राख्ने गरिएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्तीमा बीमाका कुरा समेटिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
यो यस्तो क्षेत्र हो जसले कुनै पनि देशको पूर्वाधार निर्माणमा कायापलट गरेको उदाहरणहरु थुप्रै छन् । किनभने पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन लगानीका कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका लागि बीमा क्षेत्रको पूँजीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसकारण कि बीमा गर्दा १०, २०, ३० वर्षका लागि मान्छेले पैसा राखेका हुन्छन् जुन बढ्दै गइरहेको हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले यसलाई लगानीकै लागि पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
आम सर्बसाधारणका लागि सरकारले नै केही विशेष चिज ल्याउनुपर्छ जसले उनीहरुलाई बीमा गर्न थप उत्प्रेरित गरोस् ।
अहिले स्वैच्छाले बीमा नगरेको अवस्थामा यसलाई सूधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र पुरै लाग्नुपर्छ । किनभने विकसित देशहरुमा जिडिपीको १४ प्रतिशतसम्म बीमाको योगदान रहेका उदाहरण पनि छन् । यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पक्का छ ।
अभिकर्ताहरुले गाउँघरमा गएर बीमा गर्नुपर्छ भनिरहँदा राम्रोसँग बीमाको महत्व बुझाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई त राम्रोसँग बुझाउन सकिरहेका छैनन् भने कसरी ग्रामिण बस्तीहरुमा बीमाका कुरा बुझाउन सक्छन् ?
अहिले संख्यालाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यसैले गुणस्तरमा कहिँ न कहिँ सम्झौता भइरहेको छ । बीमा क्षेत्रमा पनि त्यो देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरु अभिकर्ताको संख्या बढाउनमै केन्द्रित छन् । गुणस्तर बढाउन खासै ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । अहिले बीमा कम्पनीको अभिकर्ता बन्न सजिलो प्रक्रिया भएको छ । मैले केही मान्छे चिनेको छु, भैहाल्छ नि भन्नुभन्दा पनि यहाँभित्र पनि सिक्ने कुरा धेरै छन्, भन्ने कुरा मनन् गर्न जरुरी छ । यो निकै महत्वपूर्ण छ ।
अभिकर्ताहरुले धेरै बीमा गराए भन्नुभन्दा पनि बीमा गराउँदा कसरी गराए भन्ने कुरालाई उद्योगले ध्यान दिनुपर्छ । अब हामीले पनि अभिकर्ताको क्षमता अभिबृद्धिमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो भइरहेको पनि छ बिस्तारै । बीमा अभिकर्ताका लागि व्यवसायिक रुपमा तालिमहरु हुन थालेका छन् । यसले बिस्तारै यो समस्याको समाधान हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं ।
बीमा ब्यसायलाई सुरक्षित ब्यवसाय मानिन्छ । व्यवसाय गर्दा कस्ता चूनौतीहरु छन् ?
बीमा कम्पनीहरुको पुँजी र बिश्वनीयता धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी अरुको जीवन सुरक्षाको नारा लगाउँछौं, उनीहरुको बचतलाई सुरक्षित लगाउने अठोट लिएका हुन्छौं । त्यसकारण हामी झनै सुरक्षित रहनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पुनर्बीमाको सुबिधा छ । अहिले हाम्रोमा पनि पुनर्बीमा गर्ने कार्यक्रम छ ।
आम बिमितहरुसँगका वाचा पूरा गर्नका लागि हामी सुरक्षित रहनुपर्छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय बीमा पनि गरेका छौं । यो पालीको बजेटमा फिक्स प्यारामिटर्स पनि आएको छ । हामी यसमा पनि चनाखो छौं कि जहाँ हामीले रि–इन्सुरेन्स गरेका छौं, त्यो कम्पनीको पनि ‘फर्दर रिक्स म्यानेजमेन्ट’लाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने गर्छौं ।
अहिले यो क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा आर्थिक व्यवस्थापनको जोखिमसँगै ब्यवस्थापकीय जोखिम लगायतका कुराहरु पनि निकै महत्वपूर्ण छन् । किनभने बजार बढ्दै गइरहेको छ, जनशक्ती बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु नै अहिलेका चूनौती हुन् ।
यति हुँदा हुँदै पनि हामी यो क्षेत्रको चुक्ता पूँजी ४ दशमलव ३ खर्ब नै पुर्याइसकेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रका केही कुरा समेटिएका छन्, कसरी लिनुभएको छ ?
आगामी वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्र समेटिएको छ । बजेटमा बीमाका कुरा समेटिदा जनचेतनाको स्तर थप बढ्नेछ । यसप्रति हामी सकारात्मक छौं । धेरै वर्षपछिको बजेटमा बीमा क्षेत्र समेटिएको हो । यद्यपि हाम्रो अपेक्षा अली बढी नै थियो । बजेटमा बीमा समेट्न यसपाली शुरुवात भएको छ । आगामी दिनमा झनै व्यवस्थित हुनेछ भन्ने आशा छ ।
तपाईहरुको लगानी कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ?
हाम्रो लगानी गर्भमेन्ट सेक्युरिटिजमा बढी छ । कर्मसियल बैंकको एफडीमा पनि फोकस छ । हाम्रो पूँजीको अवधि १०/१५ वर्षको हुन्छ । बैंकसँग जाँदा एक वर्ष या २ वर्षभन्दा दिँदैन । अहिले केही बैंकरसँग सल्लाह गरेर १० वर्षे डिपोजिटका लागि सहमति गरेका छौं ।